Injineero militiri oo AMISOM tababar siinaya – Radio Muqdisho
Injineero militiri oo AMISOM tababar siinaya
Tababar ay fulinayaan Engineero Militiri oo ka kala socda Qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa magaalada Mqudisho laga bilaabay, kaas oo socon doona labo maalin, waxaana uu ku saabsan yahay dardargelinta la dagaalanka ururka Al-shabaab.
Engeerada ka socda howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, dowladda Bratain iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayagoo AMISOM siin doona awood dheeraad ah oo ay kula dagaalamaan ururka Al-shabaab iyo sidii loo gaarsiin lahaa xirfad militiri.
Wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya , Ambassador Francisco Caetano Madeira, oo furitaanka tababarkan ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay in qorshahan Engineeriyada ku saabsan uu ahaado mid hubinaya wax tarka taageerada la siiyo howlgalka AMISOM ee ku aadan dagaalka Al-shabaab uu kula jiro.
“Waan hubaa in dhammaantiin aad ogtihiin ahmiyadda Engineeriyadda uu ku leeyahay howlgalada militiri,” ayuu ku yiri Madeira war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiskiisa Muqdisho.
“Doorka arintan ayaa waxaa kamid ah dagaalada, ku lug lahaanshaha dejinta qorshaha, dhismiyaasha, rakibaada qalabka, qorsheynta dhaqdhaqaaqyada, amniga iyo xasiloonida iyo arimo kale oo muhiim ah. Sababtaas ayaana ah sida uu muhiim ugu yahay howlgalkan sanadkan soo socda,” ayuu markale yiri.
Engireerada militir sidoo kale waxaa ay sameyn doonaan fekir aruurin ku saabsan sida loo dardargelin karo howlgalada iyo sidii loo sameyn lahaa qorshe cusub oo lagu soo kordhinyo howlgalka AMISOM, waxaana sidoo kale dib u eegis lagu sameyn doonaa sida AMISOM hadda ay u fuliso howlgaladeeda isla markaana loo horumarin lahaa qorshaha AMISOM sanadka 2017.
“Siminaarkan waxaa uu na siinayaa madal aan isku dhaafsano khibrad. Waxaa balan qaadaynaa in aan la nimaadno qorshe is faham ku dhisan oo keeneysa in AMISOM ay awood u hesho dhammaan waxyaabaha ay u baahan tahay,” ayuu sheegay AMISOM Engineer Col. Kazela Kazela.
Isagoo sidoo kale, xusay in Engineeriyadda ay tahay arin muhiim u ah ciidanka isla markaana waqtigan ay ahmiyad kale leedahaya.
“Sida aad ka war qabtaan, Soomaaliya dhowaan waxaa ka qabsoomi doonta doorashooyin AMISOM oo kaashanaysa dowlada Soomaaliya waxaa ay ku leeyihiin door muhiim ahSomalia. Anaga door keena waa xaqiijinta iyo hubinta bad qabka meelaha doorashada lagu qaban doono. Engineeriyadana waxaa lagu sheegaa in ay leedahay door weyn waana arin horey loo qabtay,” ayuu sheegay ambassador Madeira.
Shir madaxeedka IGAD oo Muqdisho ka furmaya
Madaxweynaha: Istiraatijiyada Qaran ee ka hortagga argagaxisada (CVE)